Zvinyorwa zveSavannah Marie pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Savannah Marie
Savannah Marie munyori akazvimiririra uye anofarira kushambadzira pamhepo. Iye ane shungu nekutevera SEO, kushambadzira pamhepo uye zvemagariro maitiro. Mutevere pairi Twitter uye Google+.
Muvhuro, Zvita 30, 2013 Chipiri, January 21, 2014 Savannah Marie
Sosaiti nehupenyu zvakawandisa zvinoita kunge zvinofamba nemwenje-kumhanya; kubata kana kupotsa ndiyo motto yemabhizinesi mazhinji. Muchokwadi, hupenyu munzira yekukurumidza yakatora zvirevo zvitsva zvese nekuiswa kwemawebhusaiti aripo ekugovana zvemukati-fomu zvemukati - Vine, Twitter uye BuzzFeed vangori vaviri, mienzaniso inozivikanwa. Nekuda kweizvi, mazhinji mabhenji akachinjisa tarisiro yavo yekupa ruzivo vatengi vavanoda mune mapfupi mafupi
Chipiri, Zvita 10, 2013 Chipiri, January 21, 2014 Savannah Marie
Mumakore mashoma apfuura, infographics yanga iri kwese uye nechikonzero chakanaka. Statistics inowanzo kuve yakakosha kuwedzera kutendeseka, uye infographics inoita kuti zvive nyore kupaza data iro raigona kunge raive rakawomera kune avhareji kuverenga. Nekushandisa infographics, dhata inova inodzidzisa uye inotonakidza kuverenga. Infographic Evolution Sezvo 2013 yave kuda kusvika kumagumo, infographics iri zvakare kuchinja nzira iyo vanhu vanogaya ruzivo. Zvino, infographics haisi